कड्किए संस्कृतिमन्त्री भट्टराई- राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्त किन सार्ने ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले कसैको आदेशले राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्त नसारिने बताएका छन् । अभिलेखालयको ५२औँ स्थापना दिवस समारोहमा उनले उपयुक्त विकल्प तयार नभएसम्म ऐतिहासिक, पुरातात्विक सामग्री रहेको भवन नसर्ने स्पष्ट पारे ।
‘ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण अभिलेख नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मा देखाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, पाँचौँ शताब्दीदेखिका अभिलेख पढ्न नेपाल आऊ भनी पर्यटकलाई निमन्त्रणा गरिनुपर्छ, अभिलेखालयलाई खुला विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गरिनुपर्छ, अभिलेखालयमा ज्ञान लिन विश्वसमुदायलाई आह्वान गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
अभिलेखालयमा जनशक्ति, साधन एवं स्रोत पूर्ति गर्न लागिपर्ने मन्त्री भट्टराईको प्रतिबद्धता छ । अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राख्न सक्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । पूर्वमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले ३५ हजारभन्दा धेरै हस्तलिखित ग्रन्थ रहेको दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट अभिलेखालयको भवन वैज्ञानिक रुपमा निर्माण गरिएकाले सार्न नहुने बताए ।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले सिल्भाँ लेभीले राष्ट्रिय अभिलेखालयमै अध्ययन गरेर नेपालको इतिहाससम्बन्धी दुई पुस्तक लेखेको स्मरण गर्दै हजारौँ सन्दर्भ सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यो आर्थिक वर्षमा ५५ हजार ग्रन्थलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । प्राचीन सामग्री अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरी सहयोग गर्न पनि उनले आह्वान गरे । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालले अभिलेखालयमा आदिकालदेखि हालसम्मका अभिलेख सुरक्षित रहेकाले सभ्यता र संस्कृतिको बिम्बका रुपमा स्थापित गरिनुपर्ने बताए ।
अभिलेखालयको भवन रहेको जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ मा गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ । पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले अभिलेखालयलाई विभागस्तरमा स्तरोन्नति गरिएसँगै यसको सङ्गठन संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
अभिलेखालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको थलोका रुपमा स्थापित गर्न उपकरण एवं साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन वीर शमशेरले स्थापना गरेको वीर पुस्तकालय हो । पछि गएर राष्ट्रिय अभिलेखालय भएको हो । अभिलेखालय रहेको जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे पनि वीर शमशेरकै सन्तति अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश छन्, चोलेन्द्र शमशेर । उनले आफ्नो बाजे बराजुले दिएको उपहार नास्लान् ? -तस्वीर वेब
<<< : ‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेटको ड्राफ्टमा परे सन्दीप
आज फूलपाती भित्र्याइँदै : >>>
‘अडियो प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ’
जब प्रचण्डले डोली बोके…
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली-प्रचण्ड भेतवार्ता, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणबारे छलफल
एमसिसि नेपालको हितमा पारित हुन्छ : प्रचण्ड